Kulanka 1-aad ee Kalfadhiga 5-aad ee Golaha Shacabka oo maanta looga hadlayo Dastuurka Soomaaliya – Kalfadhi
Kulanka 1-aad ee Kalfadhiga 5-aad ee Golaha Shacabka oo maanta looga hadlayo Dastuurka Soomaaliya
Kulanka 1-aad ee Kalfadhiga 5-aad, Golaha Shacabka wuxuu ku furan doonaa dhageysiga warbixin uu Guddiga Dib-u-eegista iyo Lasocodka Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya ka siin doono Golaha Shacabka shaqooyinkii uu ka soo qabtay dastuurka 2-dii sano ee uu ku hawlanaa.
Sida lagu wargeliyey Xildhibaannada Golaha Shacabka, ma jiro ajande kale oo la sheegay inuu maanta Golaha Shacabku ka doodi doono. Dad fara badan ayaa aaminsan in ay ahayd inuu goluhu maanta diiradda saaro amaanka dalka, gaar ahaan kan Muqdisho, oo ay raaxadii ka qaadeen qaraxyo silsilado ah.
Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa bartiisa ku soo qoray in haddii uusan Golaha Shacabka Kulankiisa 1-aad uga hadlin maanta ka doodista sida xal loogu heli karo amaanka wadanka uu la mid yahay kuwa u daga shacabka wuxuu ugu yeeray “argagixisada”, sida uu hadalka u dhigay.
“Wuux metelaa shacabka, sababtaas ayaa loo yiri Golaha Shacabka. Haddii Baarlamaanku (Golaha Shacabku) ajandaha koowaad ee uu maanta ka hadlayo noqon waayo xaaladda amni daro ee dalka ka taagan, wuxuu qayb ka noqonayaa kuwa argagexisada shacabka u hoosaasinaya, ku tashina ma laha” ayuu Cabdiraxmaan ku yiri dhigaalkiisa.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, oo goordhaweyd gaaray Xarunta Golaha Shacabka oo ay joogaan xildhibaannada qaar, ayuu Wariyaha Kalfadhi, Maxamed Salaad Cusmaan, oo jooga xarunta sheegayaa inuu yiri “Xildhibaannada jooga ma dhama kooramkii furi lahaa Kulanka Golaha. Marka, waxaan dib u dhignay ilaa hal saac (11:30am)”.
Waddooyinka Muqdisho qaare badan oo ka mid ah ayaa maanta xiran, waxaana loo maleynayaa in ay sababtu tahay Kulanka 1-aad ee Golaha Shacabka. Laakiin, isu socodka gaadiid dadweynaha ayaa meelo badan u furan, taas oo muujineysa in xirnaanshiyaha waddooyinka qaar ay ka dabacsan tahay sidii ay ahayd waayadaan.
Kulankii Koowaad ee Golaha Shacabka oo maanta u baaqday Kooram la’aan!